I-FAQ - iGemic
Kudingeka sibuyele a Gem? gem.agency kwenza kube lula.
Silwela ukwaneliseka kwamakhasimende ngaphezu kwakho konke okunye. Uma kungakapheli izinsuku ezingama-30 kokuthola itshe (ama) lakho eliyigugu ungagculiseki nge-oda lakho, ungalibuyisela kithi lisesimweni soqobo nesingalimele. Amagugu angabuyiselwa kuphela ngalesi sikhathi sokuhlolwa kwezinsuku ezingama-30.
Sicela uthumele i-imeyili GEMIC ye-a Return Aukutholwa NIrherho (ran) Futhi engeziwe Return Imiyalelo.
NB: oda phinda us ngaphandle a wagijima angeke futhi wabuyela umthumeli. Ukubuya emaphaketheni kanye nokuthunyelwa izimali kungumsebenzi umthumeli. Zonke yokuthengisa okokugcina emva kwezinsuku 30 (izinto wabuyela kumele postmarked ngaphakathi 30 izinsuku kusukela osukwini oda wamukelwa).
Sicela angali kwezidingo leposi, kufanele ufisa ukukhansela umyalelo ngemva kokuba kuthunyelwe, kodwa ngaphambi linikezwe. Uma oda senqatshwa, ikhasimende uyakuthwala umthwalo inani eligcwele izinto uma elahlekile futhi wonke amacala Brokerage kanye nemisebenzi incurred phezu ukubuya.
Emazweni amaningi, wamemezela izimpahla kungase kube kuncike osebenzayo amasiko izimali kanye nezintela. Abathengi banesibopho noma yimaphi amasiko, ukuqoqwa kwentela kanye nemisebenzi yayikweleta. Ubuyela wenza ngenxa eshiwo ngenhla ayikwazi ogunyaziwe.
** Zonke izimbuyiselo ezenziwe nge indlela efanayo njengoba yokukhokha wathola. Shipping, umshuwalense futhi processing credit card Izindleko engeke ibuye. Akukho Imali zokustokha. Ayikho indawo yamanye wanikela.
Imibuzo More? Xhumana nathi
Security and Ubumfihlo
I-GEMIC ikhathazekile ngokuphepha nokuvikeleka kwamakhasimende ethu. Siqinisekisa ukuthi inqubo yethu yokuthengiselana iphephe ngokweqile nokuthi imininingwane yekhasimende lethu iphephile.
Lonke ulwazi lokukhokha kanye credit card ezisingathwayo on ikhasi oluphephile PayPal. Asinayo ukufinyelela credit card yakho noma imininingwane yezimali. ulwazi yokuphepha PayPal
GEMIC Laboratory ihlonipha imininingwane yomuntu kwi website yayo. Ikheli lakho le ingase isetshenziselwe okwesikhashana ukuze ukhiqize i-imeyili noma umyalelo.
Asiyukuthengisa ikheli lakho le-imeyili, ukuphequlula amaphethini, noma yiluphi olunye ulwazi.
I-GEMIC isebenzisa amakhukhi wesiphequluli ukuthuthukisa ukuvakasha kwakho futhi inike amandla inqola yethu yokuthenga online. Ayikho imininingwane yomuntu egcinwe kumakhukhi. Amakhukhi kufanele anikwe amandla okufinyelela kuzo zonke izici zesayithi lethu.
Ukuze uthole eminye imibuzo sicela uxhumane nathi.
Ungase oda isitifiketi uma ungeza into enqoleni yakho. Ukuze wenze lokhu, chofoza isixhumanisi "Engeza isitifiketi segugu sale nto" ekhasini nto imininingwane ngaphezu "Engeza ekalishini" inkinobho. Lokhu kuyovula ongakhetha isitifiketi.
Zonke izinto aqinisekisiwe kwaGEMIC. Siqinisekisa ukuthi njalo uthola lokho okukhokhelayo.
Onke amagugu eGEMIC aqinisekisiwe ukuthi abe njengoba kushiwo. Abasebenzi bethu bochwepheshe bahlola ngokucophelela futhi balinganise igugu ngalinye.
Wonke amatshe ayigugu avela ku-GEMIC ayigugu lemvelo elenziwe nguMhlaba. Asisebenzisi “amagugu” enziwe noma elenziwe elebhu.
Yini You See, Yini Thola
Isithombe ngasinye se-gem singumgqa wangempela ozothola. Asisebenzisi izithombe zezithombe noma izithombe ezifanayo zamatshe ahlukene.
Wonke amaphuzu angenhla asekelwa yisiqinisekiso sethu se-100% semali. Sima ngamagugu ethu, njengoba amakhasimende ethu emi ngethu.
Izindlela zokukhokha Izinqubomgomo
Ihlola-out esiphephile futhi kulula nge GEMIC Laboratory.
Sinikeza izindlela zokukhokha nezimo ezilandelayo for kokuqeda oda yakho:
Khokha nge-credit card nge PayPal (yalutho PayPal edingekayo)
PayPal nobheka Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, Eurocard, UNGOTI WOMCULO and American Express. ulwazi yokuphepha PayPal.
Khokha nge-akhawunti yakho ye-PayPal
Besilokhu ilungu PayPal eliqinisekisiwe.
Qaphela: Uma ungenayo i-akhawunti, ungakwazi kalula ukuvula i-akhawunti entsha ngokulandela iziqondiso on-screen.
Khokha ngokudluliswa Western Union
Lapho ukhokha ukudluliswa Western Union, izinto zakho uzobe reserved izinsuku ezintathu. Sicela usithumele nge-imeyili inombolo imali transaction esiyingqayizivele (MTN #) okudluliselwa yakho. Once izimali eziye wathola, sizobe ukucubungula oda lakho.
Qaphela: Dlulisa Izimali akumele emholweni imali oyitholile.
Khokha wemukele yasebhange eqondile
Uma ukukhokha wemukele yasebhange eqondile, izinto zakho uzobe reserved izinsuku ezintathu. Sicela usithumele nge-imeyili ibhange inkomba ukudluliselwa ikhodi once kunguwe oshaye lokukhokha. Once izimali eziye wathola, sizobe ukucubungula oda lakho.
Lapho usukulungele ukuphuma:
Bukeza inqola yakho bese ukhetha lokuthumela indlela yakho. Sinikeza elandelayo izindlela lokuthumela ezimbili kanye rates; Fedex (Izinsuku 3-4)
Standard Worldwide International iposi lomoya (izinsuku 10-21)
Chofoza u- “continue checkout” bese ufaka ikheli lakho lokuthumela.
Khetha indlela yakho yokukhokha bese uqhafaza ku- “khokha manje”.
Faka imininingwane yakho yokukhokha, noma phrinta imiyalo esesikrinini yokudluliswa kwemali.
Uma i-oda lakho selibekiwe ngempumelelo, uzothola isiqinisekiso se-imeyili esivela kithi kukheli lakho le-imeyili.
Qaphela: Sicela uqiniseke ukuthi ungeze ikheli lakho le-imeyili ukuze uqinisekise ukuthi ungathola ama-imeyili ethu okuthumela noku-oda. Uma ungatholi noma iyiphi i-imeyili evela kithi, sicela uqiniseke ukuthi uhlola ifolda yakho ye-imeyili yogaxekile noma engenamsoco.
Ikhadi lesikweletu nezinkokhelo ze-PayPal zizokhokhiswa nganoma iyiphi imali. Izinkokhelo ngeWestern Union noma ngokudluliswa kwebhange kufanele zithunyelwe ngamadola aseMelika.
Lapho ukhetha uhlobo lwemali ngaphandle kwamadola ase-US, isilinganiso sokushintshana sosuku lwamanje sizosetshenziselwa ukuguqula izintengo ezibonisiwe.
I-PayPal nebhange lakho lokucubungula (ibhange elikhipha ikhadi lesikweletu) lizosebenzisa amazinga alo okushintshanisa ukuguqula izimali, ngakho-ke, izindleko zemali oyikhethile zizohluka kancane kunamanani akhonjiswe kuleyo mali kwiwebhusayithi yethu.
I-GEMIC izokhokhisa kuphela inani elibonisiwe. Noma iziphi izimali ezingeziwe zisekelwe kuphela kuma-PayPal's, ikhadi lakho lesikweletu elikhipha izinqubomgomo zebhange noma ze-Western Union.
Uma unezinkinga ngokukhokha noma ungathanda ukuxoxa ngezinye izinketho zokukhokha, sicela ukhululeke Xhumana nathi.
Sicela ubheke ngezansi yethu Izinketho Shipping:
Ukuthumela Okuzenzakalelayo - USD 35
Izimpahla Express ngokuvamile zithatha izinsuku 3-4 for kwezidingo futhi kungenziwa zilandelwa inthanethi zonke lezi zigaba. Amaphasela insured ngokugcwele. Isignesha kuyadingeka phezu kwezidingo. Ukudiliva ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu emazweni amaningi. No amabhokisi PO (ngaphandle UAE, Saudi Arabia kanye Kuwait), Apo noma FPO amakheli ingasetshenziswa.
Qaphela: Uma 'unesiginesha efayilini', sicela ushayele i-EMS ukuhoxisa lesi sigunyazo. Amaphakheji alethwa ngaphandle kwesiginesha, ngenxa 'yesiginesha esefayilini' awakwazi ukumbozwa umphathi wethu womshuwalense.
Imeyili Ebhalisiwe Ejwayelekile - i-USD 7
Sinikeza iposi lomoya elirejistiwe phezu 120 amazwe. mail Registered is oVikelwe kuze kube USD 200. Izimpahla kuthathe izinsuku cishe 10-21 ukusebenza futhi zidinga isignesha phezu kwezidingo. Azikho ukudiliva ngamaSonto.
Onke amagugu aboniswe ngokuthi 'ayatholakala' asesitokweni futhi alungele ukuthunyelwa ngokushesha. Ama-oda acutshungulwa phakathi kosuku olungu-1 lokusebenza ngoMsombuluko - NgoLwesihlanu (ngaphandle kwamaholide)
Emazweni amaningi ukuthunyelwa okumenyezelwe kahle kungaphansi kwamanani entela nentela. Imeyili ebhalisiwe ithatha isikhathi eside, kepha ngokuvamile igwema imali eyengeziwe. Siyajabula ukuthumela njengeSipho, kodwa sicela wazi ukuthi asikwazi ukulawula izindleko ezingeziwe ezingahle zivele ezweni lakho.
Qaphela: Intela yokungenisa noma intela kuwumthwalo womthengi. Ukuthunyelwa okubuyisiwe okwenqatshwayo ngenxa yezinkokhelo ezinjalo akunakwamukelwa. Ungaxhumana nathi uma udinga amalungiselelo akhethekile.
Wonke amaphakheji kusuka ku-GEMIC afaka i-invoice ephelele. Ngiyacela Xhumana nathi ngaphambi kokufaka i-oda lakho uma udinga invoyisi egcizelele noma cha invoyisi nhlobo.
Colored amatshe Clarity Scale
I-GEMIC isebenzisa isilinganiso esilandelayo sokucaca lapho ifaka amatshe ayigugu:
IF : I-Loupe ihlanzekile - ayinaphutha ngaphakathi; mahhala ngokufakwa.
VVS : Cishe i-loupe ihlanzekile - inclusions encane kakhulu, encane kakhulu; inclusions akubonakali kangako ngaphansi kokukhuliswa okungu-10x.
VS : Ihlanzekile iso - ukufakwa okuncane kakhulu; ukufakwa okuncane kungabonakala ngeso eliqeqeshiwe noma ngaphansi kokukhulisa okungu-10x.
SI : Kufakwe kancane - ukufakwa okuncane kungabonakala ngeso lenyama.
I : Kufakiwe - ukufakwa kungabonakala ngeso lenyama.